Maxaa laga filan karaa Shirka Madaxda Maamul goboleedyada ku yeelanayaan Nairobi ? – XAMAR POST
Wasiir Islow: ” Al-shabab waxaa laga yaabaa in ay weeraraan Dekadda Hobyo”
Al-shabab oo sheegay in ay qabsadeen saldhigga Keli Waraabow ee duleedka Jowhar
DFS oo Caalamka ka dalbatay in laga taageero la-dagaalanka Al-Shabaab
Madaxweynihii dalka Suudaan oo maanta maxkamad lasoo taagay
Ciidamada Soomaaliland oo qof Shacab ah ku dilay Magalada Laas-Caanood
Waqtiga ay kulmayaan Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Jabuuti oo la shaaciyay.
Madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa oo isku khilaafay Guddiga Doorashooyinka Maamulkaas.
Xisbiga Waddani oo sheegay in uu ka baxay heeshiis ay wada galeen Xisbiya Somaliland
Wasiir Islow oo shaqo joojin ku sameeyay Agaasimihii guud ee wasaaradda Amniga Gudaha.
Maxaa laga filan karaa Shirka Madaxda Maamul goboleedyada ku yeelanayaan Nairobi ?
By Zakariye iiman On Apr 19, 2019
Nairobi (Xamar Post)-Magaalada Nairobi ee dalka Kenya Waxaa ku sugan madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Jubbaland, waxaana ay halkaasi ka wadaan abaabul iyo kulamo kala duwan.
Kulamada masuuliyiintaan ayaa waxaa qeyb ka ah kulamo ay la qaadanayaan madaxda wadamada caalamka oo ku sugan magaalada Nairobi, waxaana doorweyn ku leh arintaan hogaanka dowladda Kenya.
Madaxda maamulada Hirshabeelle, Koofur Galbeed iyo Puntland ayaa la filayaa inay ku biiraan kulamada ka dhacaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana ay kulamo la qaadanayaan beesha caalamka.
Warar aan heleyno ayaa sheegaya in madaxda maamul goboleedyada ay kulamo ku yeelan doonaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana kulamadaasi ay walaac badan ay gelliyeen madaxda dowladda.
Dhamaan madaxda maamul goboleedyada hadda wax xiriir wanaagsan ah kalama dhaxeeya madaxda dowladda Soomaaliya, marka laga reebo hogaanka Koofur Galbeed, waxaana ugu dambeeyay madaxweyne Axmed Madoobe oo maalmo ku sugnaa magaalada Muqdisho oo xiriir isku soo dhawaansho la sameeyay madaxda dowlada.
Axmed Madoobe ayaa Isniintii safar aan horey loo shaacin kaga duulay magaalada Kismaayo isaga oo gaaray magaalada Nairobi, waxaana lagu waramayaa in Axmed Madoobe uu walaac badan ka muujinayo dhaqan gelinta heshiisyadii uu la galay dowladda Soomaaliya.
Madaxweyne Waare ayaa meel cidla ah kusoo dhacay, kadib markii loo dhaqan gelin waayay heshiisyo badan oo uu la galay dowladda Soomaaliya, waxaana hadda aad u sii xumaanaya xiriirka kala dhaxeeya dowladda.
Sidaasi oo kale waxaa xumaaday xiriirka Puntland iyo dowladda, kadib markii madaxweyne Deni uu ka carooday in shir abaabulkiisa ay lahaayeen oo ka dhici lahaa magaalada Garowe loo wareejiyay Muqdisho, kaasi oo ugu dambeyn baaqday.
Madaxweynaha Koofur Galbeed oo kaliya ayaa xiriir uu kala dhaxeeyaa dowladda Soomaaliya, maadaama iyaga ay geeyeen magaalada Baydhabo,halkaasi oo ugu dambeyn lagu doortay.
Walaaca ugu badan ee shirka Nairobi laga muujinayo ayaa ah in madaxda maamul goboleedyada ay ku midoobaan markale, islamarkaana sanadaha u haray dowladda dhexe ay sameystaan isbaheysi cusub.
Walaaca kale ee laga qabo ayaa ah inay xiriir toos ah la sameystaan madaxda ay la kulmayaan, si ay kaga maarmaan dowladda Soomaaliya.
Maxaa keenay in uu baaqdo shirkii uu iclaamiyey Madaxweyne Farmaajo?
Ciidamada dowladda oo Muqdisho ka baadi goobaya kooxo dad rayid ah ku laayay Wadajir
Zakariye iiman Aug 19, 2019
Waqtiga ay kulmayaan Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Jabuuti oo la…
Madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa oo isku khilaafay Guddiga…
Xisbiga Waddani oo sheegay in uu ka baxay heeshiis ay wada galeen…
Wasiir Islow oo shaqo joojin ku sameeyay Agaasimihii guud ee…
Al shabaab oo sheegtay in sarkaal ciidan ku dileen Jowhar.
Beesha Caalamka oo ka soo horjeesatay muddo kordhintii ay sameeyeen…
Kenya oo qiratay in ay taageereyso Axmed Madoobe
Sheekh Cabdi Maxamed oo ku guuleystay doorashada Baarlamaanka Jubaland
Qarax khasaaro geystay oo ka dhacay magaalada Muqdisho
Maamulka Gedo oo shacabka uga digay qaadashada amarrada AL-shabaab
Doorashada Guddoonka Baarlamaanka Jubaland oo maanta dhaceysa
Nin Ganacsade ku dilay Qardho oo laga soo qabtay Dalka Yemen
Ciidamada Amaanka oo Muqdisho ku dilay 4 Shabaab ah oo midi…
Duqeymo Diyaaradeed oo ka dhacay deegaano ka tirsan…